Eo ny asa porofon’ny fandrosoana…
Mandeha ny resaka fanangonan-tsonia hanaovana fitsipaham-pitokisana ny praiminisitra, tapa-bolana taorian’ny fijoroan’ny goverenemanta. Nilaza ny filohan’ny Antenimierampirenena fa tsy misy izany: tsy misy porofo. Tsy manana porofo ny amin’izany koa ny IRD manana ny maro anisa.
Notendren’ny HCC hisolo toerana Raveloson Ludovic na i Leva ny depiote Razafindrazalia Yvonne, izay vadiny ihany, amin’ny lisitra “Tsy miankina Leva” ao Mahabo. Ny depiote Rakotomalala Taratriniaina Dina amin’ny lisitra IRD ao Fandriana, misolo toerana an-dRasolomampionona Hasimpirenena.
Nanentana ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily ny Ceni amin’ny fanentanana ny olom-pirenena hisoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana, izay hifarana vonjimaika anio 15 febroary. Dimy andro mialoha famaranana ny fisoratana anarana eny anivon’ny fokontany: tsy misy afa-tsy 1,5 % ny mpifidy vaovao.
Nisy ny fahatsiarovana ny faha-45 taona nitifiran’ny fahavalom-pirenena ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, ny kolonely Ratsimandrava. Nambaran’ny praiminisitra fa nahazoana tsirim-panantenana ho an’ny Malagasy tamin’ny fitiavan-tanindrazana sy fandraisana andraikitra izy.
Mitohy ary hatevenina ny fepetra fisorohana ny fidiran’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Na eo amin’ny sehatry ny fifamoivoizana izany, na fahasalamana… Tsy mbola tafiditra izany valanaretina izany. Na izany aza, efa misy ny olona avy any ivelany atokan-toerana sy arahi-maso mandritra ny 14 andro.
Nanao tatitra ny asa, taona 2019, ny Bianco, faritany Antananarivo. Nahazoana fitarainana be indrindra momba ny kolikoly ny sehatry ny fananan-tany, ny Fitsarana, ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana, ny zandarimariam-pirenena, ny fampianarana. Efa misy ny fandavan’ny olona kolikoly sy ny fahasahiana mitoroka.
Amin’izany rehetra izany, mandeha sy mandroso ny raharaham-pirenena? Eo ny asa porofon’izany… Ezahina vitaina alohan’ny 26 jona hankalazana ny faha-60 taon’ny fahaleovantena, ohatra, ny Rovan’Antananarivo.